NGC 1052 - ဝီကီပီးဒီးယား
NGC 1052 (lower left) imaged witha32-inch telescope
လေ့လာရေး ဒေတာ (J2000 epoch)
−8° 15′ 21″
ထောင့်ဖြတ် အချင်း (V)
3.0′ × 2.1′
မြင်သာသော အရွယ်အစား (V)
အခြားကြည့်ရန်: ဂယ်လက်ဆီ၊ ဂယ်လက်ဆီ စာရင်း
NGC 1052 သည် စီတပ် ကြယ်စုတန်းရှိ ဘဲဥပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်ပြီး နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီနှင့် အလင်းနှစ် ၆၃ မီလီယံခန့်အကွာ၌ တည်ရှိသည်။ ဂလက်ဆီ၏ အလယ်၌ တက်ကြွသော ဂယ်လစ်တစ်ဝတ်ဆံ တည်ရှိပြီး ငယ်ရွယ်သော ကြယ်တာရာများ ပေါက်ဖွားလျက် ရှိသည်။ ယင်းအပြင် ဂလက်ဆီ၏ ဗဟိုတွင် အင်မတန်ကြီးမားသော တွင်းနက်တည်ရှိပြီး နေထုထည်ပေါင်း ၁၅၄ မီလီယံ ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 1052။ 2013-12-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ J. L. Tonry (2001). "The SBF Survey of Galaxy Distances. IV. SBF Magnitudes, Colors, and Distances". Astrophysical Journal 546: 681–693. doi:10.1086/318301. Bibcode: 2001ApJ...546..681T.
↑ "The Evolutionary History of the Elliptical Galaxy NGC 1052" (2005). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 358: 419–431. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.08778.x. Bibcode: 2005MNRAS.358..419P.
↑ Fernández-Ontiveros, J. A. (2011). "The most recent burst of star formation in the massive elliptical galaxy NGC 1052". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters 411: L21–L25. doi:10.1111/j.1745-3933.2010.00985.x. Bibcode: 2010MNRAS.tmpL.179F.
↑ Spectral analysis of the accretion flow in NGC 1052 with Suzaku။ iopscience.iop.org။ 1 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=NGC_1052&oldid=400124" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။